Samsung Phone Photo Recovery: Ladnaansho photos lumay ee qasabno yar
> Resource > Samsung > Samsung Phone Photo Recovery: Ladnaansho Photos Khasaaray ka Samsung taleefanka gacanta
Qaadashada sawiro leh oo aan telefoonka gacanta Samsung, laakiin laga badiyay oo dhan oo iyaga ka mid!
Waxaan lahaa safar aad u fiican qoyskeyga todobaadkii hore, oo anna waxaan soo qaaday badan oo sawiro qurux badan la Samsung telefoonka gacanta. Markii aan la qorsheeyay si ay u kala soocaan saaka, oo kulligood wada ahaa tageen! Anigu sooma aan dib up. Ma suurogalbaa in kabsado kuwa sawiro ka Samsung telefoonka gacanta? Waxa ay muhiim ii. Thanks.
Dhab ahaantii, sawiro aad qaaday oo aad telefoonka gacanta Samsung ay ku kaydsan yihiin kaadhka SD gudaha telefoonka, iyadoo aan loo eegayn waxa ka mid ah gudaha ama dibadda. Marka aad tirtiray photos kaarka SD ah, ay si dhab ah uma isla markiiba baaba'aan, laakiin kaliya meesha ka hor waxay ku nagaadeen waxaa sida isticmaali karo calaamadeeyay. Marka aad saaray xog cusub, waxay noqon karaan overwritten. Sidaa darteed, barnaamijka xaq u Samsung soo kabashada sawir telefoonka, waxaad dib u soo ceshano kartaa sawiro lumay effortlessly.
Sida aynu soo kaban karto sawiro lumay ee taleefannada gacanta Samsung?
First of dhan, aad u hesho qalab sawir kabsado Samsung telefoonada gacanta, Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) . Tani software kabashada xogta Android oo keliya ma aha kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado sawiro ka telefoonka gacanta Samsung, laakiin sidoo kale kuu ogolaanaya in aad dib u soo ceshano fariimaha tirtiray, xiriirada iyo video on Samsung telefoonada gacanta. Sida Android software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee, waxa ay gebi ahaanba ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo. Just leeyihiin isku day ah.
Download version maxkamad free of this software Samsung soo kabashada sawir telefoonka gacanta hoos ku qoran:
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi model telefoonka gacanta Samsung iyo OS ee Android halkan ka hor inta aadan u qabtaan soo kabashada. Ma aha in dhamaan telefoonada gacanta Samsung waxaa lagu hadda oo ay taageerayaan Wondershare Dr.Fone for Android, haddii idinkaa iska leh habaysan.
Haddii aad rabto in aad soo kabsado photos, video iyo music ma aha oo kaliya ka kaarka SD gudaha telefoonka gacanta, laakiin sidoo kale ka computer, ama aaladaha kaydinta kale sida drives dibadda adag, kamaradaha, kaamirada, drives USB, iPod, MP3 / ciyaartoyda MP4 , iwm, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u sameeyaan in 3 tallaabo.
Step1. Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka on your computer
Ka dib markii ay soo degsado Wondershare Dr.Fone for Android, rakibi iyo aad u hesho waxa maamula on your computer. Furmo suuqa ugu weyn ee barnaamijka muuqan doonaa sida soo socota.
Step2. Connect aad telefoonka gacanta Samsung (awood debugging USB)
Markaas xiriiriyaan phone in kombiyuutarka. Ka hor waxa ay qabanayaan, waxaad eegi kartaa telefoonka iyo in la hubiyo in debugging USB waxaa u suurta ama aan. Haddii aan, waxaad raaci kartaa sida hoos ku qoran waa in hadda dhigay.
Haddii aad u sameeyey, si toos ah u xirmaan aad telefoon oo ku boodaan si ay tallaabo saddexaad.
Step3. Baarista Samsung telefoonka mobile sawiro laga badiyay waxaa ku
Hadda, aad ku socoto in aad telefoon halkan iskaan. Si aad u hesho baaritaan siman, hubi batteriga aad telefoon iyo hubiyo in ka badan 20%. Markaas riix "Start" si ay u bilaabaan shaandheynta xogta ku yaal.
Doonistiisa Falanqaynta dhamaado dhowr ilbiriqsi. Marka aad aragto furmo suuqa hoose, fadlan ka qalab aad. Waxaa jiri doona codsiga magacaabay Codsiga Superuser ah dhisayaa ilaa shaashadda. Waxaad u baahan tahay si ay u gudato adigoo gujinaya batoonka "ogolow", ka dibna ku biiro Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) on your computer. Guji "Start" si ay u bilaabaan baaritaan ku.
Step4. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawiro laga badiyay Samsung telefoonada gacanta
Waxaad ku eegaan karo oo dhan photos helay on your Samsung telefoonka mobile sawirka kadib. Iyaga Hubi mid mid u fiirso kuwa muhiimka kuu ah. Markaas riix "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Intaa waxaa dheer, in aad ku eegaan karo oo ka soo kabsado fariimaha, xiriirada iyo videos in natiijada scan marka aad u baahan tahay.
Fiiro Gaar ah: Waxa aad isticmaali kartaa Wondershare MobileGo for Android inay dajiyaan sawiro si ay u qalab aad. Waxa kale oo oggolaanaysa in aad maamulato ku jira qalabka Android aad effortlessly, ay ka mid yihiin fariimaha, xiriirada, videos, barnaamijyadooda, iwm
Ugu dambeyntii, aynu soo bixi version maxkamad free of Wondershare Dr.Fone for Android hoose si aad u leeyihiin isku day ah: